Isisombululo seGesi yoShishino
I-ACTION izinikele ekuboneleleni ngesisombululo esikhuselekileyo nesisebenzayo sokufumanisa igesi kwiinkqubo ezifana nemigodi yeoli kunye negesi, ukucocwa kwepetroleum, ukugqitywa kwepetroleum, unyango lwegesi yendalo, kunye nokugcinwa kwe-oyile kunye negesi kunye nokuthutha kwi-petroleum kunye negesi yendalo kumashishini.Isoftware yokuqokelela idatha yecala langaphambili leshishini linokuqokelela iintlobo ezahlukeneyo zedatha yenzwa ngokusebenzisa ulwazi lwedatha.Emva koko idatha eqokelelweyo icutshungulwa ekuqaleni kwisixhobo sokuhanjiswa kwe-IoT kwaye ithunyelwe kwisiseko sedatha esiphakathi ngesango le-IoT.Okokugqibela, zicutshungulwa kwaye ziboniswe kwimephu yeGIS okanye ngeminye imisebenzi esembindini.
Ukuze kusetyenziswe ngokupheleleyo ixabiso ledatha kunye neqonga, izicelo kwi-mobile icala elikrelekrele, kubandakanya i-IOS kunye namaqonga e-Android, ziphuhliswa ngakumbi ukwenza iqonga elisebenzayo kwiitheminali ezininzi kunye nokubonelela ngeenkonzo ezifanelekileyo nezixabisekileyo kubathengi.Isisombululo kunye neemveliso zisetyenziswe ngempumelelo kwaba bathengi balandelayo:
Taxinan Oilfield, Xinjiang Tuha Oilfield, Tarim Oilfield, Karamay Oilfield, Shaanxi Changqing Oilfield, He'nan Puyang Oilfield, PetroChina Southwest Oil and Gas Branch, PetroChina West China Administration Bureau, Qinghai Oilfield, Liaohe Oilfield, Panjin Petrochemical, Yinkutai Chemical Coal Iqela kunye neShanxi Luan, njl.
▶ Isixokelelwano sokubona irhasi sinokubonisa ulawulo oluluqilima olusembindini kunye namandla olawulo lwezowuni ngokumisela inkqubo;
▶ Isistim inokubona unxibelelwano phakathi kwekhompyutha ebamba ii-alam kunye noninzi lwabalawuli;
▶ Isixokelelwano sinokubeka iliso nokulawula ubume bezixhobo ezikhulu ngamandla;
▶ Inkqubo inokubeka iliso kwidatha yoxinaniso kunye nobume besixhobo kuzo zonke iileya zolawulo lwerhasi kuzo zonke iindawo ngexesha lokwenyani;
▶ Isixokelelwano sinonxibelelwano lwemizobo esebenza ngomatshini womntu onokubonisa izixhobo kuzo zonke iileya zolawulo lwerhasi kuzo zonke iindawo ngokohlobo lweetshati zokuhamba;
▶ Isixokelelwano sinokufumana umqondiso osetyenziswayo/ozenzekelayo wolawulo olukude kunye nolawulo olukude/lokumisa lwesixhobo solawulo lwangaphandle kumaleko olawulo lwe-alam kuzo zonke iindawo;
▶ Inkqubo inexesha lokwenyani lokujongwa kwedatha kunye nedatha yembali kunye nokugcinwa kolwazi kunye nemisebenzi yokukhangela.Idatha kunye nolwazi lubandakanya ukugxila kwegesi, ulwazi lwe-alamu kunye nolwazi olungaphumeleli;
▶ Le nkqubo ikwaneenkcukacha zexesha lokwenyani/zembali kunye noluhlu lolwazi kunye nemisebenzi yokukhangela egobileyo kunye neenkcukacha zembali kunye nolwazi lwengxelo yokuthumela ngaphandle kunye nemisebenzi yokushicilela;
▶ Abasebenzisi abasebenzayo balawulwa ngogunyaziso olunamanqanaba amaninzi ukuqinisekisa ulawulo lwenkqubo yoluhlu kunye nokusebenza ngokukhuselekileyo;
▶ Isixokelelwano sinokuqonda unxibelelwano olungenazingcingo kunye nemigangatho yolawulo lwerhasi yendawo;
▶ Inkqubo inomsebenzi wokukhutshwa kwewebhu kwi-intanethi.Ezinye iikhomputha zinokundwendwela inkqubo ngokusebenzisa amaphepha ewebhu ukuqonda ngaxeshanye ujongo lweekhompyuter ezininzi.
umtshini wegesi osisigxina, Isikhangeli segesi se-lpg, umtshini wegesi onokutsha, IAlam yerhasi etshayo, isixhobo segesi, China Gas Detector,